एनएमबी बैंकको अध्यक्षमा पुनः पवन गोल्यान निर्वाचित
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा पुनः पवनकुमार गोल्यान चयन भएका छन् । उनलाई नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाएका छन् । पुस २४ गते बिहीबार नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज) जावलाखेल, ललितपुरमा सम्पन्न एनएमबि बैंक लिमिटेडकोे २४ औं वार्षिक साधारण सभाले...
एनएमबी बैंक र जानकी फाइनान्सको वार्षिक साधारणसभा आज, यस्ता छन् मुख्य अजेन्डा
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक र जानकी फाइनान्स लिमिटेडको आज बिहीबार वार्षिक साधारणसभा हुँदैछ । एनएमबी बैंकको ललितपुरका जावलाखेलस्थित नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा साधारणसभा हुनेछ । सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको कुल ३५ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ । प्रस्तावित लाभांशमा...
एनएमबी बैंकको आकर्षक लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, बोनस सेयर र नगद कति?
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट प्रस्ताव गरेको आकर्षक लाभांश सुरक्षित गर्ने आज बिहीबार अन्तिम मौका रहेको छ । एनएमबी बैंकले साधारणसभा र लाभांश प्रयोजनका लागि भोलि शुक्रबार (पुस ४ गते) देखि पुस २४ गतेसम्म बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको मतलब लाभांश र साधारणसभामा भाग लिन योग्य हुन आज (पुस ३ गते) सम्म एनएमबी...
एनएमबी बैंक नेपालमा भिसाको विशेष मुख्य सदस्य बैंकहरूको समूहमा प्रवेश
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले भिसा वल्र्डवाइड प्रा.लि.सँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी नेपालका सीमित बैंकहरूमध्ये भिसाको एक मुख्य सदस्य बैंक बन्न पुगेको छ । भिसासँगको यो विशेषाधिकार प्राप्त यो सदस्यताले बैंकका लागि विभिन्न क्षेत्रमा भुक्तानी प्रणाली स्वीकार गर्नका लागि नयाँ अवसर खुल्नेछ । जसले मुलुकमा बैंकको बजार पहुँचलाई अझ विस्तार...
आकर्षक लाभांश पारित गर्न एनएमबी बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । आकर्षक लाभांश प्रस्ताव गरेको एनएमबी बैंक लिमिटेडले आफ्नो २४ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति तय गरेको छ । बैंकको हिजो मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आगामी पुस २४ गते निर्णय गरेको हो । सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने भनी प्रस्ताव गरेको आकर्षक लाभांश अनुमोदन गर्नेछ । बैंकले गत वर्षको...
एनएमबी बैंकद्वारा ‘एनएमबी जीवनचक्र बचत खाता’ आरम्भ
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक लिमिटेडले नेपाली वित्तीय बजारमा एक विशिष्ट प्रकारको ‘एनएमबी जीवन चक्र बचत खाता’ प्रस्तुत गरेको छ । यो नवसिर्जनशील योजनामा सात सहयोजनाहरु समावेश छन् । जसमा व्यक्तिको जन्मदेखि वृद्धावस्थासम्मका सम्पूर्ण बैंकिङ आवश्यकता पूरा हुने गरी प्रस्तुत गरिएको छ । यो बैंकिङ योजनाले निक्षेपकर्ताहरुको उमेर समूहका...
एनएमबी बन्यो ‘टभ राइल्यान्ड’ बाट आईएसओ प्रमाणपत्र पाउने नेपालकै पहिलो बैंक
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंक जर्मनीको टभ राइल्यान्डबाट आईएसओ २७००१ः२०१३ प्रमाणपत्र पाउने नेपालकै पहिलो बैंक बनेको छ । बैंकलाई यसका ग्राहकहरूको डाटा सुरक्षाका लागि तथा सरोकारावालाहरूको सूचनाको सुरक्षा कायम गर्नका लागि सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली (आईएसएमएस) का उच्चतम मानकहरूको विकास र कार्यान्वयनका लागि यो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको...
काठमाण्डौ । एनएमबि बैंक सार्क एनिभर्सरी अवार्ड फर कर्पोरेट गभर्नान्स २०१८ बाट पुरस्कृत भएको छ । उक्त पुरस्कारले उच्च तहको कर्पोरेट गभर्नेन्स् तथा पारदर्शिताका लागि बैंकको बचनबद्धतालाई प्रदर्शन गरेको छ । साथै एनएमबि बैंक साउथ एसियन फेडेरेशन अफ अकाउन्टस् (साफा) वेस्ट प्रिजेन्टेड एनुअल रिपोर्ट अवार्ड “सर्टिफिकेट अफ मेरिट” बाट पनि...
एनएमबीद्वारा पृथक घरकर्जाको स्किम लञ्च, आफ्नो सुविधाअनुसार ऋण तिर्ने विधि छान्न पाइने
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले आफ्नो घर कर्जा सुविधा अन्तर्गत एक नयाँ एनएमबि बलूनिङ्ग एण्ड रिभर्स बलूनिङ्ग योजना शुरु गरेको छ । एनएमबि बैंकमा घर कर्जा सुविधा लिन चाहने ग्राहकहरुले यस नयाँ योजना अन्तर्गत अब आफ्नो आवश्यकता अनुसार सम–मासिक किस्ता(इएमआई) बुझाउने विधि चयन गर्न सक्नेछन् । बलूनिङ्ग सुविधाले घर कर्जा लिने ग्राहकलाई लिएको...
एनएमबी बैंकद्वारा खुद नाफामा ४८.०५%को छलाङ, अन्य सूचकमा पनि प्रगति
काठमाण्डौ । गत वर्षको मुनाफाबाट आफ्ना सेयरधनीहरुलाई ३५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको एनएमबी बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद नाफामा ४८.०५ प्रतिशतको छलाङ मारेको छ। प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले खुद नाफा ८१ करोड १५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष बैंकको खुद नाफा ५७ करोड १ लाख रुपैयाँ थियो...
अधिकांश वित्तीय सूचकमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको गिरावट, खुद नाफा १९.९३%ले घट्यो
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा खुद नाफा १९.९३ प्रतिशतले घटेको छ । प्रथम त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा बैंकले खुद नाफा ८४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्ष बैंकको खुद नाफा १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ थियो । बैंकले समीक्षा अवधिमा वितरणयोग्य मुनाफा ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आर्जन...
काठमाण्डौ । एनएमबी बैंकले ‘एनएमबी पूर्व–स्वीकृति आवास कर्जा’ (एनएमबी प्रि–अप्रुभ्ड होम लोन) सुविधा आरम्भ गरेको छ । अब आवास कर्जा प्राप्त गर्न इच्छुक ग्राहकहरूले आफूले किन्न लागेको सम्पत्ति छान्नुपूर्व नै आफ्नोे ऋणको सीमा स्वीकृति प्राप्त गर्नसक्ने छन् । आवश्यक ऋणको सीमा स्वीकृति व्यक्तिको भुक्तानी क्षमतामा आधारित हुनेछ,...